Ijaarsii bu’uuraalee misoomaa yuuniversitiiwwan 45 wal hubachuu dhabuu qooda fudhatootaan dubatti harkifachuunsaa ibsame - ዜና ከምንጩ
Ijaarsii bu’uuraalee misoomaa yuuniversitiiwwan 45 wal hubachuu dhabuu qooda fudhatootaan dubatti harkifachuunsaa ibsame
Ijaarsii bu’uuraalee misoomaa yuniiversiitiiwan 45nii bajata birrii biiliiyona 92n ijaaramanii qaamooleen qooda fudhattotaa wal hubatanii hojjachuu dhabuusaaniitiin duubatti harkiifachuunsaa ibsamee.
Motummaadhaan bajatnni birrii biiliyona 92 ramadamee dhaabbilee barnootaa ola’anaa keessatti hojiin bu’uuraalee misoomaa jalqabamuus qaamooleen ijaaran, ijaarsiisaniifii mariisiifttonni hojjichaa wal hubatanii hoojjachuu dadhabuusaaniitiin yeroo ka’ameefitti xumuuramuu dhabuusaa kan dubbate abbaa taayiitaa to’aataa hojiiwwan ijaarmaaleedha.
Dhaabbilee barnootaa ola’anaa kessatti baratootaaf mana jireenyaa, daree baruumsaa, galma walgahii, kutaa quu’annofii qorannofii akasuumas kutaalee tajajiilawwan garaa garaaf olan waluumaa galatti daree 754 ijaarmisaanii jalqabe akka ture itti gaafatamaan qunamtii umataa abbaa taayiitaa too’ataa hojiiwwan ijaarsaa obbo Siisaay daribee addis maaladaatti himaniiru.
Ijaarsawwan bu’uraalee misoomaa jalqabaman ademsii baruufii barsiisuu si’ataafi bu’a qabeessa akka ta’an shoora guddaa akka qaban itti gaafatamttichi dubbataniiru. qaamooleen projaktoota kana ijaarsisan tokko tokko hiri’na mu’lisaniin warren ijaaran immo mahaalaqa ergii fudhatanii booda iddo ijaa jijjiran warreen marisiiftootaas sirritti waan hin hojjannef duubatti harkiifachuu hojiiwan ijaarmaa kanaaf sababii gudda ta’eera.
Warerrii covid 19 biyya kenyattis adunyaarattis ka’ee ol ba’uun gatii meeshaalee ijaarsaa dhaabbileen kun akka gufuu tokkotti kan ka’u ta’u isaa yoo kaasaniisijaarsa bu’uraalee misoomaa waggotii heddu dura jalqabeef akka sababiitti ka’uu kan hin dandenye ta’u eeraniiru.
Obbo Siisaay itti dabalaniis bu’uuraaleen misoomaa dhaabbilee barnootaa keessatti jalqabaman xumuramuu dhabuun isaanii qulqullina barnootaa iratti simannaa barattotaa iratti dhiibbaa cimaa akka qabaatu akkasumas bajata biyyaa iratti dhiibbaa guudda akka bulchu dubataniiru.
Ijaarmaalee jalqabamanii hin xumuramiin sia’iinaan xummuranii tajajiilaaf miijataa taasiisuuf koreen dhaabbile narnootaa huundaa irraa walitti baba’ee hunda’uusaafi amma hagayya 30tti rakkoleen dubatti harkifachuu ijaarmaalee kanaa qoratee ifa akka taasiisuu ibsaniiru.
Ijaarmaaleen bu’uraalee misoomaa bajatnni motummaa ol’anaa itti baheefii lammileen itti fayyadaman waan ta’aniif miira biyyummaa cimaafii gaabbi guddaadhaan xumuramu qabu jadhaniiru.rakko ijaarmaalee dhabbile barnootaa ola’ana kana irra jiruu furuuf korewwaniifii dhaabbileen kun ciimminaan akka hojjatan ibsaniiru.
Itti gaafatamttichi dabalaniis akka biyyaatti wanttonni itti kasaarre heeddun waan jiruuf kana kessaa ba’uudhaaf hoojiin wal taasiisuu yoo hojjatamaa jiraatees gara fuula duraatti tarkaanfiin fudhatamu akka qabu kaasaniiru.Dhaabbile barnootaa olaanatti kan muul’ate dubatti harkifannaan hojii ijaarmaalee barumsa ta’ee ijaarmaalee wal fakkaatoo biraa iratti mula’achuu akka hin qabne obbo Siisaay turmaata addis maaladaa waliin taasiisaniin dubbataniiru.
Gara fuula duraattis ijaarmaaleen bu’uuraalee misoomaa gaggefaman qulqullinnaafii bajata motummaan qabeen yeroo ka’ameetti akka xumuuramuu hojiin bala’a iratti hojatamuu qaba jadhaniiru.
አዲስ ማለዳ 15 Adoolessa 2013 No 8
Total views : 7536938